သင်ျဘောသီးသုပျကွောငျ့ အသကျပေးခဲ့ရတဲ့ ၁၆နှဈအရှယျ ကြောငျးသူလေး – Daily Feed MM
Admin_John | July 11, 2020 | International News | No Comments
အစားမတျော တဈလုတျ၊ အသှားမတျော တဈလှမျးဆိုတဲ့ စကားကို ပရိသတျကွီးတို့လညျး ကွားဖူးမှာပါ…. မစားသငျ့သော အစာကို တဈလုတျမြှ စားမိသဖွငျ့ ဘေးဥပဒျ ဖွဈတတျသကဲ့သို့ မသှားသငျ့သော အရပျသို့ တဈလှမျးမြှ
သှားမိရုံဖွငျ့ ဘေးအန်တရာယျ တှရေ့တတျတယျဆိုတာကို ဆိုလိုတာပဲ ဖွဈပါတယျ…ခု ပွောပွမဲ့ အကွောငျးအရာလေးကတော့ သဘောင်ျသီးသုပျစားမိလို့ အသကျပေးလိုကျရတဲ့ ဆယျကြျောသကျ မိနျးကလေးတဈယောကျကွောငျး
ဖွဈပါတယျ…ဝမျးနညျးစရာအကွောငျးဖွဈပမေဲ့ ပရိသတျကွီးတို့လညျး အစားအသောကျကို ဂရုတစိုကျ ဆငျခွငျစားတတျအောငျလို့ ပွနျလညျမြှဝရေခွငျး ဖွဈပါတယျ…ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ Online သတငျးစာဖွဈတဲ့ Samui Times သတငျး
စာမှာဖျောပွထားတာကတော့ ထိုငျးနိုငျငံက Nong Fon လို့ချေါတဲ့ ၁၆ နှဈအရှယျမိနျးကလေးဟာ သူ့အမဝေယျလာတဲ့ ဂဏနျးသဘောင်ျသီးသုပျကို စားပွီးနောကျ သဆေုံးသှားခဲ့ရပါတယျ…Nong Fon ရဲ့ အမဖွေဈတဲ့ Mrs. Kajorn
ဟာ သွဂုတျလ ၂၄ ရကျနကေ့ ဈေးကနေ ဂဏနျးနဲ့ လုပျထားတဲ့ သဘောင်ျသီးသုပျကို ဝယျလာခဲ့ပါတယျ…. အမဝေယျလာတဲ့ သဘောင်ျသီးသုပျကို အဲဒီနမှေ့ာပဲ Nong Fon လေးဟာ စားခဲ့ပါတယျ…နောကျတဈနေ့ အရုဏျတကျ
ခြိနျမှာ Nong Fon ဟာ မခံမရပျနိုငျအောငျ ဗိုကျနာပွီး ပွငျးထနျတဲ့ ဝမျးပကျြဝမျးလြှောခွငျးကို ခံခဲ့ရပါတယျ….အဲဒီအခြိနျထိ မိဘဖွဈသူတှဟော Nong Fon လေးကို ဆေးရုံမပို့သေးပါဘူး…နလေ့ယျလညျးရောကျ ဝမျးလြှောတာဟာပို
ဆိုးလာပွီး Nong Fon လေးဟာ တကိုယျလုံး သှေးဆုတျထားသလို ဖွူဖတျဖွူရျောနဲ့ သတိတောငျ ကောငျးကောငျးမလညျတော့ပါဘူး…အဲဒီအခြိနျကမြှ အရေးပျေါလူနာတငျကားကို ဖုနျးဆကျချေါခဲ့ပါတယျ…ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှဟော
ဖွူဖတျဖွူရျောဖွဈပွီး သတိလဈနတေဲ့ Nong Fon လေးကို အရေးပျေါအသကျကယျနညျးနဲ့အရငျကယျခဲ့ပါသေးတယျ…ဒါပမေဲ့ မရတဲ့အဆုံး ဆေးရုံကို ချေါသှားရာမှာတော့ ဆရာဝနျရောကျမလာခငျမှာပဲ Nong Fon လေးဟာ သူခဈြတဲ့
သူ့မိဘတှနေဲ့ လူ့လောကကွီးကို နှုတျဆကျထှကျခှာသှားခဲ့ပါပွီ…ဆရာဝနျရဲ့ ဆေးဘကျဆိုငျရာမှတျခကျြအရ အစာအိမျအူရောငျရမျးနာရောဂါ(Gastrointestinal tract Infection)ကွောငျ့ သဆေုံးခဲ့ရတယျလို့ သိရပါယျ….Nong
Fon လေးဟာ နောကျဆုံးခရီးကို သူ့ရဲ့ သူငယျခငျြးတှလေိုကျပါပို့ဆောငျပေးခဲ့ပွီး ကောငျးရာမှနျရာရောကျဖို့ ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွပါတယျ…Nong Fon လေးဟာ မွနျမာစကားပုံအရ အစားမတျောတဈလုတျဆိုတဲ့ အတိုငျး မစားသငျ့တဲ့
အစာကို တဈလုတျမြှ စားမိရုံနဲ့ အသကျပါပေးဆပျလိုကျရတာဖွဈပါတယျ… ပရိသတျကွီးတို့လညျး အစားတဈခုစားတော့မယျဆို အဲဒီအစာဟာ ကောငျးသေးရဲ့လား …သနျ့ရှငျး လတျဆတျရဲ့လား… ဘေးဥပါဒျဖွဈစနေိုငျလားဆိုတာကို
အရငျလလေ့ာကွညျ့ပွီးမှ စားကွပါလို့ အကွံပွုပါရစနေျော…
အစားမတော် တစ်လုတ်၊ အသွားမတော် တစ်လှမ်းဆိုတဲ့ စကားကို ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ကြားဖူးမှာပါ…. မစားသင့်သော အစာကို တစ်လုတ်မျှ စားမိသဖြင့် ဘေးဥပဒ် ဖြစ်တတ်သကဲ့သို့ မသွားသင့်သော အရပ်သို့ တစ်လှမ်းမျှ သွားမိရုံဖြင့် ဘေးအန္တရာယ် တွေ့ရတတ်တယ်ဆိုတာကို ဆိုလိုတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…ခု ပြောပြမဲ့ အကြောင်းအရာလေးကတော့ သဘောင်္သီးသုပ်စားမိလို့ အသက်ပေးလိုက်ရတဲ့ ဆယ်ကျော်သက် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကြောင်း
ဖြစ်ပါတယ်…ဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းဖြစ်ပေမဲ့ ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း အစားအသောက်ကို ဂရုတစိုက် ဆင်ခြင်စားတတ်အောင်လို့ ပြန်လည်မျှဝေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်…ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ Online သတင်းစာဖြစ်တဲ့ Samui Times သတင်းစာမှာ ဖော်ပြထားတာကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက Nong Fon လို့ခေါ်တဲ့ ၁၆ နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးဟာ သူ့အမေဝယ်လာတဲ့ ဂဏန်းသဘောင်္သီးသုပ်ကို စားပြီးနောက် သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်…Nong Fon ရဲ့ အမေဖြစ်တဲ့ Mrs. Kajorn
ဟာ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့က ဈေးကနေ ဂဏန်းနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ သဘောင်္သီးသုပ်ကို ဝယ်လာခဲ့ပါတယ်…. အမေဝယ်လာတဲ့ သဘောင်္သီးသုပ်ကို အဲဒီနေ့မှာပဲ Nong Fon လေးဟာ စားခဲ့ပါတယ်…နောက်တစ်နေ့ အရုဏ်တက်ချိန်မှာ Nong Fon ဟာ မခံမရပ်နိုင်အောင် ဗိုက်နာပြီး ပြင်းထန်တဲ့ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်….အဲဒီအချိန်ထိ မိဘဖြစ်သူတွေဟာ Nong Fon လေးကို ဆေးရုံမပို့သေးပါဘူး…နေ့လယ်လည်းရောက် ဝမ်းလျှောတာဟာပို
ဆိုးလာပြီး Nong Fon လေးဟာ တကိုယ်လုံး သွေးဆုတ်ထားသလို ဖြူဖတ်ဖြူရော်နဲ့ သတိတောင် ကောင်းကောင်းမလည်တော့ပါဘူး…အဲဒီအချိန်ကျမှ အရေးပေါ်လူနာတင်ကားကို ဖုန်းဆက်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်…ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာ ဖြူဖတ်ဖြူရော်ဖြစ်ပြီး သတိလစ်နေတဲ့ Nong Fon လေးကို အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်းနဲ့ အရင်ကယ်ခဲ့ပါသေးတယ်…ဒါပေမဲ့ မရတဲ့အဆုံး ဆေးရုံကို ခေါ်သွားရာမှာတော့ ဆရာဝန်ရောက်မလာခင်မှာပဲ Nong Fon လေးဟာ သူချစ်တဲ့
သူ့မိဘတွေနဲ့ လူ့လောကကြီးကို နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ…ဆရာဝန်ရဲ့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမှတ်ချက်အရ အစာအိမ်အူရောင်ရမ်းနာရောဂါ(Gastrointestinal tract Infection)ကြောင့် သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါယ်….Nong Fon လေးဟာ နောက်ဆုံးခရီးကို သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီး ကောင်းရာမွန်ရာရောက်ဖို့ ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါတယ်…Nong Fon လေးဟာ မြန်မာစကားပုံအရ အစားမတော်တစ်လုတ်ဆိုတဲ့ အတိုင်း မစားသင့်တဲ့
အစာကို တစ်လုတ်မျှ စားမိရုံနဲ့ အသက်ပါပေးဆပ်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်… ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း အစားတစ်ခုစားတော့မယ်ဆို အဲဒီအစာဟာ ကောင်းသေးရဲ့လား …သန့်ရှင်း လတ်ဆတ်ရဲ့လား… ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်စေနိုင်လားဆိုတာကို အရင်လေ့လာကြည့်ပြီးမှ စားကြပါလို့ အကြံပြုပါရစေနော်…